3 Little ကစကား | အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ »3Little ကစကား: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်
3 Little ကစကား: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန် APK ကို
- အသစ်ကအမြင်အာရုံစကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်းဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ဖျော်ဖြေဖို့လုပ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်ပဟေဠိ:3Little ကစကားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ! ပုံကိုကြည့်ပါကနှင့်ဆက်စပ်သောသုံးယောက်စကားများခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစား! စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစတင်ရန်, ဂိမ်းကအရမ်းလွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသည်။ ပုံ၏အနီးကပ်တက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုံရိပ်အသေးစိတျဆနျးစစျဖို့ဓာတ်ပုံထိပုတ်ပါ။3Little ကစကား: နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာရန်ပဟေဠိ WordCollapse, crosswords, Sudoku, solitaire, စကားလုံးအသင်းအဖွဲ့နှင့် trivia ဂိမ်းနဲ့တူစကားလုံးဂိမ်းများကိုခစျြတဲ့သူကလူအဘို့ဖြစ်၏။
• 200 အဆင့်ဆင့်ကျော် - ပျော်စရာများစွာသောနာရီ။
•သင်ခန့်မှန်းလို့မရဘူးဆိုသောစကားကို skip မှ Option ကို။
လေ့လာရေး၏သင့်ဦးနှောက်နှင့်အာဏာကျင့်သုံး! ကျနော်တို့ရှာဖွေနေတဲ့စကားများကြိယာ, နာမ် (ဧကဝုစ်သို့မဟုတ်အများကိန်း), သို့မဟုတ် adjective နာမဝိသေသနနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသစ်နှင့်အလွန်ဖြစ်လို့အခမဲ့စကားလုံးရှာဖွေရေးဂိမ်းစမ်းကြည့်ပါ! တမိသားစုလုံးအတွက်ပျော်စရာ!
11.90 ကို MB